musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Mararamiro eLGBT ndeeSatani here?
Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Eswatini Breaking News • Hurumende Nhau • Kodzero Dzevanhu • LGBTQ • nhau • vanhu • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Humambo hweEswatini inyika yakanaka ine tsika dzekuchengetedza uye yaimbozivikanwa seSwaziland.
MuEswatini, eSwatini Zvepabonde neVanhurume Nevanhukadzi (ESGM) yakavambwa seimwe remapoka mashoma ekukurudzira vanhu kuti vazivikanwe zviri pamutemo uye kuchengetedzwa kwevanhu veLGBT + muhumambo hweAfrica.
Ungochani hazvisi pamutemo muSwaziland (eSwatini) uye LGBT + vanhu vanosangana nematambudziko akakomba erusarura nekushungurudzwa, muchidimbu nekuda kwechinyadzo cheHIV / AIDS. Humambo hunochengetedza hutongwa naMambo Mswati III avo vakambotsanangudza ungochani se "satanic".
Asi sangano pacharo rave kurwira kuti rivepo mushure mekurambidzwa kunyoresa kunyoresa munyika dzemakambani munaGunyana gore rakapera.
Maererano ne Africa yose, munyori akapikisa akati chinangwa cheESGM chaive chisiri pamutemo nekuti zviite zvebonde revamwe chete zvaive zvisiri pamutemo muumambo. Kodzero yekuenzana haina kushanda kune vanhu veLBBT, + munyori akadaro nekuti zvebonde uye bonde hazvina kutaurwa zvakajeka mubumbiro reSwatini.
Boka ikozvino raendesa kurwira kudare repamusoro soro renyika sezvo richipokana nedanho remunyori, richiti kuramba kwemunyori kwakatyora kodzero dzenhengo dzeESGM dzekuremekedzwa, kushamwaridzana nekutaura zvakasununguka, kubatwa zvakaenzana uye kusasarurwa. Vanoti munyori anonyengedza mutemo uye kuti kuramba kwavo kunyoresa ESGM kwakatyora kodzero dzenhengo dzayo.
LGBT vanhu vekuEswatini vanogara vachitarisana nerusarura uye kushungurudzwa. Saka nekudaro, vazhinji vanosarudza kuramba vari muwadhiropu kana kuenda kuSouth Africa yakavakidzana, uko kuroorana kwevakomana kana vakadzi chete kuri pamutemo. Pamusoro pezvo, LGBT + vanhu vanotarisana nemwero wakanyanya kwazvo wehutachiona hweHIV / AIDS. Eswatini ine hutachiona hweHIV hwakanyanya pasi rose, paine 27% yevanhu vechiSwati vari kutapukirwa).
Kunyangwe zvese izvi, Eswatini yekutanga parada kuratidzira kwakaitwa muna Chikumi 2018.